Saturday August 05, 2017 - 22:11:22 in Wararka by Super Admin
Filimkan ayaa lagu soo bandhigayaa maxbuus Kenyaati ah oo fariintii ugu dambeysay u diraya dadkiisa Islamarkaana ugu dambeyntii la khaarijinayo.
Muuqaalkan oo la daawan karo muddo 13 daqiiqo ah ayuu maxbuusku kula hadlayaa dadkiisa, dowladiisa, eheladiisa iyo saaxiibadiisa.
Marka uu dhameeyo wixii fariin iyo dardaaran ah ee uu u hayo dadkiisa iyo dowladiisa ayaa waxaa soo dul istaagaya dagaalyahan katirsan Al Shabaab oo aad u qalabeysan, ka dibna dhowr xabadood ayaa looga dhufanayaa madaxa iyo qeybaha sare ee jirka.
Dhamaadka filimka, waxay Mu’asasada Al-kataa’ib dadka Kenyaatiga ah dib u xusuusisay in Maxbuuskan uusan ahayn maxabuuska kaliya ee ku jiray gacanta Mujaahidiinta balse ay jiraan maxaabiis kale oo weli ku harsan jeelka Xarakada.
FG: Video-ga sooma gudbin karno sababa la xiriira muuqaallo adag oo ku jira
Hoos Ka Daawo Qaar Kamid Ah Sawirrada.